Ushintsho lwabasebenzi: umsebenzi ekhaya
Ngubani phakathi kwethu ongazange aphuphe ukuba ngumculi wamahhala? Phonsa iwashi ye-alamu, uyeka eofisi uze uqale ukwenza into oyithandayo? Sekunjalo, ukungabikho komsebenzi "weklasikhi" (iingubo, ikhefu lokuphumla kunye neeyure ezimbini ngosuku ngenxa yobomi bomntu siqu) kunokunceda kakhulu ubomi bethu bemihla ngemihla. Kodwa ukuba uqonde iphupha, kubalulekile ukuqonda: yintoni esebenza ekhaya kunye nendlela yokuyihlela?
Yiyo kanye into eyenziwa yintsebenziswano yabasebenzi ayinakukunikezela-umsebenzi wasekhaya unokufumana kuphela ukufumanisa kwakho. Kulo mbono we-freelancing, wonke umntu uza ngendlela yakhe. Kwiimeko eziqhelekileyo, utyhafile ngomsebenzi "kaMalume". Enye inketho ibonakalisa abesifazana abahlala kwimimandla emikhulu, kufuneka bachithe iiyure ezingama-2 ngosuku ngosuku ukusuka kwindlu ukuya eofisi nasemva. Emva koko uya kucinga ngokuqinisekileyo: akukukho budenge ukubulala ixesha elininzi kwizithuthi zikawonkewonke kunye nokuma kwimizila yeendlela kunye nokuba unokuphepha?
Ukungquzulana nabaphathi basenokuba yinto "yokubangela" ukutshintshela kwi-freelancing. " Ngaphambi kokuba ndibe ngumfaki-zithombe ozimele, ndasebenza kwi-arhente yentengiso. Imisebenzi yam kwakufuneka iquke kuphela iipowusta zokukhangisa zokuthengela abantu abathengi, kodwa umphathi wam omncinci wayengazikhathaleli ngale nto , - uDaria wabelana iminyaka engama-30. - Wandisebenzisa ngaphandle kokuthintela - undithumelele ukudubula amaqela amashishini kunye neenkomfa zokunyathelisa, ukwenza imifanekiso yabaphathi abaphezulu beenkampani zabaxhasi kwiimfuno zabo. Ngenxa yoko, ebudeni bemini ndahlala ndihlala kwindlela, kwaye ngokuhlwa ndandifakela iifoto kwiofisi kwaye ndandingaqhelanga ukugqiba ngaphambi ko-9 ebusuku. Kodwa ndinenhlanhla: umsebenzi wam wawubonwa ngabahleli abaningana be-edition enkulu, othe wuleza waqala ukudibanisa i-oda ukuba ndidubule. Ekuqaleni ndazinikela ngeeveki ngeeveki, kungekudala kwakukho imiyalelo emininzi yokuba ndikwazi ukuyeka umsebenzi wam osisiseko kwaye ndiqale ukukhetha into endiyifunayo ekuthatheni imifanekiso, kwaye kuluphi na umyalelo ukulungela. "
Okanye mhlawumbi awusebenzi ngenxa yokuba ungenalo ithuba lokuchitha iiyure eziyi-8 ngosuku ngosuku e-ofisini - kufuneka uthabathe uze uthathe umntwana kwi-kindergarten, umdle ukutya kwasemini uze uhambe naye ngokuhamba? Kule meko, i-freelancing ingaba yintetho yegolide: ukusebenza kwimoya yamahhala kuza kukuzisa imali, akuyi kukuvumela ukuba uyibale izakhono zakho zobugcisa kwaye ushiye ixesha elaneleyo lokufumana imisebenzi yendlu.
Kule minyaka yobugcisa obuphezulu, akukho mntu okhusela ekufumaneni imali kwizabelo zamahhala. Into ephambili kukuqonda into onokukunikezela ngayo abathengi beenkonzo zakho, kwaye usebenzise ngokufanelekileyo ukulungiselela umsebenzi wakho.
"Okokuqala, kufuneka ukhethe umsebenzi onokuyifumana ingeniso xa kungekho msebenzi weofisi. Kukho ukhetho oluninzi. Okokuqala, ungathatha amagosa oqeqesho oluphambili ngexesha lakho lokukhulula (ngaphandle kokuba, ngokuqinisekileyo, oku kuchasene nekhontrakthi yakho yengqesho) kwaye, xa ufumene uncedo oluhle phakathi kwabathengi abaninzi abanokuthi, bayeke kwaye bahlanganyele kuphela kwi-freelancing, "icebisa umcebisi womsebenzi u-Elena Leonova .
Ngokomzekelo, uya kuphuhlisa i-website yeenkampani ezingenakukwazi ukunxibelelana ne-arhente ekhethekileyo, gcina i-akhawunti yeefemu ezincinci, ukuguqulela itekisi ekhaya (ezininzi i-arhente eziguqulela zisebenza ngokufanayo, abasebenzi babo bavele kuphela ngosuku lomvuzo wabo eofisi). Ukongeza, ungazama ukuba ngumcebisi ozimele kwindawo oye wasebenza kuyo ngoku. Kodwa gcinani engqondweni ukuba abacebisi bafunwa kuphela kwaye baziwa kakhulu kwiingcali zeemarike ngegama elihle.
Kwaye ekugqibeleni, umthombo wemali engenayo ingaba yinto yokuzonwabisa, ukuba ulawula ukuthengiswa kwezityalo zomsebenzi wakho. "Mhlawumbi uthanda ukudibanisa, kwaye zonke izihlobo ziqinisekisa ukuba unetalenta xa ucele ukuba uzibophe omnye umjelo okanye uthathe? Ukuba wenza okuthile kakuhle, unganqikazi ukunikela umsebenzi wakho ukuthengiswa, - u-Elena Leonova uyaqiniseka. - Akufuneki ukuba uqale ukuthatha imali kubahlobo abasondeleyo, kodwa ukubeka umsebenzi wakho kwi-Intanethi kwaye ubeke amathegi exabiso kubo kubaluleka. "Isandla sobunzima" sithandwa kakhulu kunanini ngaphambili, kwaye kukho njalo umthengi ngezinto ezingavamile. " Kuye kufaneka kwimithwalo yokuhlobisa kunye nokukhamba kombhali, ukuhlobisa okwenzelweyo, iifowuni zeefoto, iipendeni, iingubo kunye namathoyizi. Zama ukuthengisa iimveliso zakho emsebenzini. Ngaloo ndlela, wena, ngaphandle komngcipheko, jonga amandla akho uze ubone indlela ezidumile ngayo ezobugcisa.
Nangona kubonakala lula kunye nokufumaneka kwe-freelancing, akukho mfuneko yokukhawuleza ukuhamba. Okokuqala, kufuneka ulondoloze imali - "isiseko" esifanelekileyo, apho ungathembela khona, ngelixa ukwakha ubudlelwane kunye nabathengi, ukwakha ishedyuli yakho kunye nokujongana nezinto ezisebenza ngokutsha. Kumele ube nolondolozo olwaneleyo ubuncinane kwiinyanga ezimbini zobomi obumnandi. "Sebenzisa" ixesha lokuqokelela "ukuqeqesha ekufumaneni iilaydi nokuthetha nabaxumi, - uxelise u-Elena Leonova. "Kancinci, ungatshintshela kwithuba lendawo yengqesho emsebenzini wakho, kodwa ungayeki ude ufumane amaninzi amaninzi e-free-order order.
Ngokuqinisekileyo, ukusebenza ekhaya okanye kwishedyuli yamahhala ngaphandle kwendlu, awuyi kuphinda udibanise kusasa ebhedeni ukusuka kwiwashi ye-alamu uze ungene kwiofisi. Ishedyuli yenkampani iya kuphelelwa ukuba ikhona kuwe, kodwa kuya kuba nemfuneko yokuhlela ixesha lakho. "Ngaphambi kwangoko, misela ukuba ungaphi iiyure ngosuku ofuna ukuzinika ukusebenza kwaye ngethuba luni lomhla ukhululekile ukwenza oko? Njengoko umkhuba ubonisa, ixesha elifanelekileyo, elisoloko linikwe umsebenzi "wasekhaya," livela kwiiyure ezimbini ukuya kwiiyure ngosuku. Yaye usasaza njani ezinye izinto - ukupheka isidlo, ukucoca, ukuhamba nokudlala imidlalo? Ngelinye igama, yenza isimiso sakho esilungeleyo kwaye uzame ukunamathela kuyo, "icebisa u-Elena Leonova.
Intsapho yakho iya kuqonda ukuba isimo sakho esitsha sikhululekile kwiofisi yekazikazi njengoko kukhanya kwaye kungabi namnyama, nangona kunjalo uya kusebenza. Ngoko ke, lungela ukuba yonke imisebenzi yasekhaya iya kufuneka yenziwe kuwe, nokuba umyeni wayethetha ukungafuni ukucima iipatethi kwaye kubonakala ukuba isetyenziselwa ukukhupha imfucuza. "Ngomlingane kunye nabantwana kungcono ukuvuma ngokukhawuleza: umvuzo wakho womsebenzi yinto ebalulekileyo, efuna ixesha kunye nomzamo. Lo ngumsebenzi ofanayo nakwiofisi okanye kwiofisi karhulumente. Musa ukuphazamisa ixesha "lokusebenza", - uqhubeka u-Elena Leonova. "Ngokukhawuleza okanye kamva, intsapho iya kuqonda ukuba kufuneka ihloniphe ukhetho lwakho!"
Ekuqaleni, ezinye iinketho zinokuthi: iirhafu zilibaziseka, abathengi banqabe iinkonzo zakho ngomzuzu wokugqibela, kwaye umsebenzi uya kuthatha iiyure eziyi-12-14 ngosuku uze "ungabikho". Kodwa amandla okukwenza kuphela umsebenzi owufunayo (naphi na nanini na xa ufuna), akungabazeki, uyakuxabisa.
IINDAWO NAMASEBENZI EMSEBENZI EKHAYA
• Uya kuthatha isigqibo malunga nokuba usebenze kangakanani kwaye nini ukuphumla.
• Ekugqibeleni ungayifumana isicelo kwizakhono zakho ezizodwa, izakhono kunye nezakhono.
• Akukho mqhubi oza kumela umphefumlo wakho.
• Akudingeki uchithe ixesha kunye nemali endleleni ukusuka ekhaya ukuya kwiofisi nasemva.
• Unokusebenza kwiiprojekthi eziliqela ngelo xesha, ukuze ungakhathazeki.
• Ingeniso yakho ingenakho ukuzinza, kwaye ngoko kuya kuba lula ukucwangcisa uhlahlo lwabiwo-mali.
• Akukho mntu uya kuninika inkokhelo yonyango yamahhala, ikhefu ehlawulwe kunye nekhefu lokugula.
• Kufuneka ulungele usuku olungasebenzi olungqiniswanga.
• Ngamanye amaxesha uya kufuneka ufune ukubiza abaxumi ukuba bahlawulwe ngokukhawuleza umsebenzi owenziweyo.
Ukuze inkonzo yerhafu ingabi nambuzo, kunengqiqo ukuba i-freelancer ifumane isatifiketi esisemthethweni somrhwebi kwaye sigqibe isivumelwano kunye nenkampani yophicotho-mali yokugcinwa kwee-accounting kunye neirekhodi zerhafu (okanye zixhotyiswe ngeenkcukacha ezifanelekileyo kwaye zigcine zonke iincwadi ngokuzimela). Ukuze ube ngumntu osomashishini, kufuneka ugcwalise isicelo kunye nomhloli werhafu, uhlawule umrhumo wombuso (ruble 400), fumana i-ID yerhafu, uvule i-akhawunti yebhanki kwaye ufumane itywina. Xa ubhalisa, ungakhohlwa ukhetho lwenkqubo yerhafu elula (irhafu kweli lixa iya kuba ngu-6% yenzuzo yakho). Ngaloo ndlela, awuyi kulahlekelwa ngamava akho asemthethweni, uya kukwazi ukufumana iimali-mboleko ezivela kwibhanki kunye nokufumana imali kwi-akhawunti yakho yomhlalaphantsi, njengomsebenzi oqhelekileyo we-ofisi.
UMaria Kashina, isazi sengqondo
Akubona bonke abantu abadalwa ukusebenzela ekhaya. Abaninzi bethu badinga ukukhuthazwa okongezelelweyo ngesimo somphathi oqinileyo kunye neshedyuli ecacileyo. Ndiyazi imimiselo embalwa xa ushiya i-freelance iphelile ekungasebenzi. Kwaye ngoko, ngaphambi kokuba wenze isigqibo esibalulekileyo, kufuneka uzibuze imibuzo embalwa kwaye uphendule ngokunyanisekileyo. Ngaba ndiyakwazi ukuhlela umsebenzi wam suku? Ngaba kulula ukuba ndiqhagamshelane nabaxhasi? Ngaba ndilungele ukufumana ngaphantsi? Ukujonga ukuphumelela, izakhono zonxibelelwano, izinga eliphezulu lokuzibhokoxa, ukukwazi ukutshintsha ngokukhawuleza kwaye uphumule - ezi ziyimpawu eziphambili ze-freelancer. Ukuba ungeke ukwazi ukuzihlambulula ngosuku olude, ushiye ixesha lokuzilibazisa kwaye zonke iimpelasonto zikhetha ukulala ekhaya esiqheqeni-ngokuqhelekileyo ukulungelelanisa kungekhona kuwe. Akukho nto engalunganga ngayo. Unokuhlala ufumana umsebenzi ofanelekileyo kwi-labor exchange - umsebenzi wasekhaya akuyona inketho yokugqibela ehlabathini. Sonke sahlukileyo yaye asiyibophelelekanga ukuba siphumelele yedwa okanye kuphela kwiqela.
Umsebenzi ophezulu othembisayo wesifazane
Ukuxinezeleka kwindawo yokusebenzela, ukuphathwa kwengcinezelo
Ngaba kufanelekile ukuqala umcimbi kunye nomphathi?
I-massage efanelekileyo kunye ne-aromatherapy
Ukutya ngeentsimbi zebell, ipeas kunye nesipinashi
Ilayisi nge vermicelli (ruz maa shaarie)
Ukutya okunye kunye nesiselo kumntwana
I-Snack kunye ne-mackerel ebhemayo "I-Strawberry"